Amanyathelo okufezekisa ukucheba okugqibeleleyo, iingcebiso zesiphelo esifanelekileyo | Amadoda aQinisekileyo
Uyifumana njani into yokucheba ngokugqibeleleyo
Ukutsheva kubonwa ngamadoda amaninzi njengesiqhelo esicaphukisayo kunye nesiqhelo semihla ngemihla. Kwiimeko ezininzi, ukucheba sisenzo esenziwa ngokukhawuleza ngcono, ngaphandle kokuthathela ingqalelo iingozi zolusu.
Nangona kunjalo, ukucheba okugqibeleleyo kunokuba nako Iziphumo zobuhle kunye nezisempilweni. Ke ngoko, ukuzinikela okufanelekileyo kunye nokuqwalaselwa kuyafuneka ukuyenza ngokuchanekileyo kwaye uyisebenzise njengonyango olusebenzayo lobuhle.
1 Ngaba i-blade efanelekileyo, i-razor, i-razor?
1.2 Isitshetshe, eyona shavu yakudala
2 Ezinye iingcebiso ezisebenzayo zokucheba okugqibeleleyo
Ngaba i-blade efanelekileyo, i-razor, i-razor?
Kuxhomekeke kwisixhobo esisisebenzisayo, ukugqitywa kuya kwahluka kwimeko nganye.
Zezona zithandwa kakhulu. Zininzi iintlobo, yomelele kwaye incinci, inenani elingaphezulu nangaphantsi leencakuba, njl. Ngamanye amaxesha ayingombono olungileyo ukugcina nokuthenga umgangatho ongcono.
Ku ulusu olubuthathaka, Yeyona icetyiswa kakhulu ziingcali. Nangona ngamanye amaxesha kungasebenzi ngokucheba ngokugqibeleleyo njengensimbi okanye iincakuba, ukufezekisa okona kugqibeleleyo kuyafuneka isikhumba esomileyo.
Isitshetshe asisiso esona sigqibo silungileyo iindevu ezinqabileyo. Ukuba iinwele zinzima kwaye ziyamelana, iincakuba ezizezona zineentloko ezijikelezayo, kuba zinika umyalezo wokukhanya nokuthantamisa kulusu kwaye ke ngoko kukucheba ngokugqibeleleyo.
Kwimeko iindevu ezintle, kucetyiswa ngakumbi iincakuba zamakhonkco, zibuthathaka kwaye zilawuleka.
Isitshetshe, eyona shavu yakudala
El ixesha lokucheba lide kunye nencakuba, kodwa ngokungxama mkhulu kunye nezibonelelo ezininzi kulusu.
Ezinye iingcebiso ezisebenzayo zokucheba okugqibeleleyo
Akukho kukucheba ngesikhumba esidumbileyo, vuka nje. Ngokufanelekileyo, thatha ixesha, umzekelo, ngelixa utya isidlo sakusasa.
Ukucoca kwangaphambili. Kufuneka coca ulusu ngesepha kunye namanzi apholileyo, enceda ukuyivuselela.
Ukucheba yonke imihla akucebisi. Kungcono ukunika ulusu ixesha lokuphumla.
Imveliso ukuba isicelo kufuneka ukuba esemgangathweni.
El ukucheba ngokungakhawuleziyo, ngokuzola.
La iposi yokuhambisa amanzi yesikhumba kubalulekile.
Imithombo yemifanekiso: IPunto Fape / iYouTube
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Chetyiwe » Uyifumana njani into yokucheba ngokugqibeleleyo
Umngcipheko wokuxuba iziselo zamandla notywala
Imango izisa iisuti zayo entwasahlobo / ehlotyeni ngo-2017